सुनौलो शान्ति फाइनलमा – Khel Dainik
सुनौलो शान्ति फाइनलमा
प्रथम भू.पू. सैनिक कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता अन्तरगत सुनौलो शान्ति क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
मंगलबार सम्पन्न अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो सेमिफाइनल खेलमा सुनौलोले आयोजक भू.पू. सैनिक जवई स्र्पोटिङ क्लबलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ३–० ले पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुग्न सफल भएको हो ।
मंगलबारको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी शुटआउटबाट लिनुपरेको थियो । जसमा सुनौलो शान्तिले निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । अधिकांश समय बललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे तापनि प्राप्त गोलको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा अन्तत् आयोजक भू.पू. सैनिक सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको हो ।
खेलमा आयोजक भू.पू. सैनिकका अमर डंगोलले पहेंलो कार्डको सामना गरेका थिए ।
त्यस्तै मंगलबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सुनौलो शान्तिका गोलरक्षक रेजिन श्रेष्ठ म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत चैत्र ३० गते बुधबारको दोस्रो सेमिफाइनल खेल राधाकृष्ण फुटबल क्लब र झरना स्पोर्टस् क्लबबीच हुने आयोजक क्लबका अध्यक्ष गोपीराम पुनले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनल २०७४ साल बैशाख १ (नयाँ वर्ष) गते हुनेछ ।
प्रतियोगिताको विजेताले नगद १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैया तथा ट्रफी हात पार्नेछन् भने उपविजेता टोलीले ट्रफीसहित नगद ५१ हजार १ सय ११ रुपैया हात पार्नेछन् । प्रतियोगितामा कुल १४ टोलीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
← चौथौ गोर्खाली रनिङ कपको उपाधि एफसी रियाललाई सी वाई सी अत्तरिया रुपन्देही च्यालेंजेर्ससँग ४२ रनले पराजित →
पाराल्याम्पिकका लागि केल्मीको प्रायोजन चैत्र ३०, २०७३
ट्राई सिरिजका लागि १९ खेलाडी (नामावली सहित) चैत्र ३०, २०७३
फुटबल खेलाडी र अफिसियललाई खेलस्थल मै कोभिड विरुद्धको खोप ! चैत्र ३०, २०७३
नेपाली क्रिकेटलाई अझै उचाईंमा पुर्याउने सपनासहित पारसको सन्यास चैत्र ३०, २०७३
अल्मुतारीले माफी माग्दै भने “नेपाली फुटबललाई मेरो विशेष सम्मान” चैत्र ३०, २०७३
एन्फा प्रवक्ता राईले दिए राजिनामा चैत्र ३०, २०७३